Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Mekisiko » Mberi kweCurve: SB Architects Inoenderera Nekuwedzera Portfolio muMexico Amidst Booming Hospitality Sector.
St. Regis Los Cabos kuQuivira - Mufananidzo wakapiwa neSB Architects
Nzvimbo yeMexico yakabudirira yekugamuchira vaenzi inopa mikana mikuru yezvivakwa uye maindasitiri edhizaini.
Global Architecture Firm Inosuma Zvirongwa Zvitsva sezvo Mexico Inoramba Ichipa Yakakura Inogoneka uye Mikana yeIndasitiri.
Semusika wakagadziridzwa wekugamuchira vaenzi muCentral neLatin America, nyika yakanakira kushanya nekuda kwenzvimbo yainoshuvira uye kuwanikwa muAmerica, yakasimba hupfumi hwehupfumi, mitemo yekutengeserana yakanaka, zvivakwa zvemazuva ano, uye hupfumi hwenhaka yetsika uye zvishamiso zvakasikwa.JLL's Hotels & Hospitality Group's Hotera Investment Outlook ye2021) Nyika parizvino iri kuona kukura kunoshamisa muchikamu chayo chekugamuchira vaeni, iine mahotera 139 matsva, kusanganisira makamuri makumi matatu nemakumi matatu nenomwe, ari kuitika munyika yose.iyo TOPHOTELPROJECTS yekuvaka dhatabhesi).
SB Vagadziri, femu yezvivakwa zvepasi rese inozivikanwa nekugadzira mhinduro dzekuhwina mibairo dzakanangana nenhaka yakasiyana uye hunhu hwenzvimbo yega yega, inoona Mexico semusika unovimbisa. Mushure mekushanda munyika kweanopfuura makore gumi, femu ine yakakura portfolio yemapurojekiti munyika uye akati wandei mapurojekiti ari kuitika.
"Tinokudzwa nemukana wekushanda nekugadzira munyika ine kukura kunoshamisa uye shanduko," akadaro SB Architects Mutungamiriri uye Mukuru, Scott Lee. “Muchirongwa chese, tinochikoshesa kugadzira zvinoenderana nesaiti uye nekubatanidza machira enharaunda. Nekukurudzira kubva mumitauro yedunhu, zvekushandisa, uye tsika nemagariro zvagara kwenguva refu, tinogadzira mhinduro dzemagadzirirwo dzinoshanda nekuchengetedza nharaunda dzakasiyana uye dzinobvumira vashandisi kuti vabatane nekwavanoenda."
Chikamu chekushanya cheMexico chaona kupora kunoshamisa uye kuwedzera mukati meiyo COVID denda.
Muenzaniso uri kuLos Cabos, Mexico, uko SB Architects iri kugadzira The St. Regis Hotel nePark Hyatt Residences. Dunhu iri rakaona kudzoreredzwa kwezana muzana rekufamba uye kushanya kubva pakatanga denda.Iyo Los Cabos Tourism Board) Zvivakwa zvese zviri zviviri chikamu cheumbozha 1,850-acre nharaunda mumoyo weQuivira. Iyi nzvimbo inoshuviwa - inoratidzirwa nemawere egranite mawere, matutu makuru anopeperetswa nemhepo uye matsimba erenje - inobatanidza vashanyi nehunhu, ivo pachavo, uye nguva.
The St. Regis Los Cabos kuQuivira, yakarongerwa kuvhurwa mukupera kwa2023, inoramba yakavimbika kune inosimba tsika yeLos Cabos neMexico. Ihotera iyi ichazadzwa nehunyanzvi hwakasarudzika, girazi rinowanikwa munharaunda, uye machira, pamwe nekusiyana kwe toni, magadzirirwo, mumvuri, uye mumvuri une mapopu eruvara.
The Park Hyatt Los Cabos kuQuivira Nzvimbo dzekugara dzinotora kurudziro kubva munharaunda ine yazvino spin, leveraging rough, organic zvinhu, kugadzira magadzirirwo uye kufamba. Iyo yakasarudzika villas inotenderera kumahombekombe egungwa, ichipa yakananga kumahombekombe kwegungwa uye yakawedzera maonero kumahombekombe uye mhiri kwegomo.
Gara pakati pemasango akasvibira emiti yemangrove uye matongo ekare pamhenderekedzo yegungwa yeMayan akatarisana nemvura inodziya yeCaribbean, Hilton naWaldorf Astoria muCancun ichafadza pfungwa. Kubatanidza kunzwisiswa kweYucatán nechimiro chemhando yepamusoro, mahotera ese akagadzirwa aine zvinangwa zvekunatsiridza runako rwesaiti uye nekugonesa chiitiko chevaenzi. Kuroora nzvimbo inoshamisa ine zvivakwa zvinokatyamadza, dhizaini yeSB Architects inopindura kumamiriro echisikigo esaiti, ichigadzira kudyidzana kunoramba kuripo pakati penzvimbo yemukati neyekunze. Iyo oasis inotungamira vashanyi parwendo rwakasarudzika rwekunyudzwa kwetsika, zvechinyakare zveMexico zvinhu zvakasanganiswa kuita zvakanaka nehunyanzvi hwazvino.
SB Architects yakashandurwa Conrad Punta de Mita, nzvimbo yekutandarira yakavhurwa munaGunyana 2020 muLitibu paRiviera Nayarit, nekuvaka pamusoro pezvivakwa zviripo kuti vagadzire dhizaini yechizvino-zvino inotaridza nekunatsiridza runako rwenzvimbo iyi uchiisa vashanyi kuti vabatane nehupfumi hwenzvimbo iyi, ine tsika dzakasiyana. Yakagadzirwa senge portal munzvimbo, nhoroondo uye hupfumi hwetsika dzakasiyana-siyana dzedunhu, hotera ine makamuri mazana matatu nemakumi maviri nemana yakagadzirirwa kupa kuzorora kubva mukumhanya kweMexico City uye kunyudzwa munzvimbo yepasirese inozivikanwa seMexico's 'Pacific Treasure. .' Dombo rakacheneswa mudunhu uye palette yeruvara yakanyarara inopindirana nechena yemazuva ano dhizaini inoratidza kwete kupfuura nyika. Kukudza chimiro chechitendero cheHuichol, chinyakare uye hunyanzvi hwekushongedza chakave chikamu chakakosha chekugadzira dhizaini, ichibatanidza echinyakare mandala mapatani mukati menzvimbo yekutandarira, mukati, uye kushongedza.
Gara panzvimbo yakakurumbira yemaeka mashanu pamahombekombe egungwa munzvimbo huru yekushanya, Sofitel SO Los Cabos inodonha zvinyoronyoro ichidzika kumahombekombe ane jecha jena pazasi, ichipa maonero asina kuvharika ePacific Ocean. Yakafemerwa nenhoroondo inoyevedza yeMexico haciendas uye basa repakati renzvimbo dzekuunganidza mhuri, nzvimbo yekutandarira inombundikira akashinga, emazuva ano ezvivakwa ane mavara akajeka emukati, achipa rukudzo kune yechokwadi Zócalo (nzvimbo dzenharaunda) chiitiko. Iyo SO mhando ndiyo epitome yeakaomesesa yemazuva ano French aesthetic iyo, kana yakasanganiswa neyakapfuma yakapfuma tsika yeMexico, inogadzira yakasarudzika uye inokoka chiitiko.
Yakavakirwa mumatope ejecha pamhenderekedzo yegungwa inofema uye yakasarudzika padyo neguta rinoyevedza rekoloni reSan José del Cabo, TLEE Spas rakagadzirirwa Spa Alkemia kuZadún, Ritz-Carlton Reserve, nzvimbo ine hutano inopemberera kunaka kwezvisikwa uye kudziya, mweya, uye mutsa une mutsa weMexico. Yakagadzirwa zvine mutsindo nechisikigo mupfungwa, Spa Alkemia inosendamira munzvimbo inokosheswa yemvura pamberi pemvura - uko Gungwa reCortez nePacific Ocean zvinopindirana neseri kwemakomo eSierra de la Laguna - ichiisa pfungwa yekugara zvakanaka kuburikidza nesimba rekutanga re. gungwa uye nzvimbo yerenje uye kusanganisa nhaka yehunyanzvi yeMexico neazvino maitiro, tekinoroji, uye zvisingaperi kuporesa modalities.
Ichangobva kupemberera kusvitsa kwayo makore makumi matanhatu, SB Architects yakagadzira mukurumbira wepasi rese wezvigadziriso zvekugadzira zvakaumbwa nehunyengeri hwesaiti. Kambani iyi yakawedzera hutungamiriri hwayo mukugamuchira vaeni, pekugara uye kushandisa musanganiswa munyika makumi matatu nemakondinendi mana, iine tsika yekudyidzana uye timu ine simba revanhu vane shungu vanotyaira nhaka yekambani nekushanduka-shanduka. Kubva payakatanga mukugara kwetsika muna 60, SB Architects yakaisa pamberi pekugara pachokwadi kune saiti uye kugadzira pfungwa yakasimba yenzvimbo inopindirana nevashanyi, vashanyi uye vagari padanho remanzwiro. Sezvo ichienderera mberi nekuwedzera kwehungwaru uye portfolio yayo ichiratidza kwakatokura kusiyana kwenzvimbo, femu inosimudzira mweya wayo webhizimusi uye hunyanzvi hwekuvaka kubatanidza vanhu kune mumwe nemumwe uye kune zviratidziro zvenzvimbo inosaina.
SB Architects' saiti-chaiyo, hyper-localized dhizaini yakakonzera mapurojekiti enhaka akadai seCalistoga Ranch, Auberge Resort inonyudza vashanyi mumitambo yechisikigo uye kunyaradzwa kwechisikigo; Santana Row, chirongwa chakasanganiswa-chekushandisa chinosimudzira kuwanikwa uye pfungwa ine musoro yenharaunda muSan Jose; uye Fisher Island, yakasarudzika chitsuwa nzvimbo yekutandarira iyo yakaremekedzwa neAIA Miami Test yeNguva Mubairo uye yakanyora SB Architects semugadziri wayo wekutanga kweanopfuura makore makumi matatu nemapfumbamwe. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve SB Architects uye mukurumbira wepasirese wekunaka kwavakavaka mukuronga nekugadzira mapurojekiti pasi rose, tinya pano.
Dzimwe nhau pamusoro peMexico
Covid mutsa hotera Huichol Hyatt inivhesitimendi Latin Mekisiko Mexico City Miami Ocean Pacific-Ocean nzvimbo yorudekaro Sofitel Spa ushanyi